UZuma ubuyela ukuzophakamisa Amakhosi | Scrolla Izindaba
UZuma ubuyela ukuzophakamisa Amakhosi
UDumisani Zuma kulindeleke ukuthi aqale isizini okokuqala lapho Amakhosi ezobhekana neqembu lakhe lakudala i-Bloemfontein Celtic enkundleni yazemidlalo i-FNB ngoMgqibelo ngehora lesithupa ntambama.
Lo mgadli we-Kaizer Chiefs ungene ngesikhathi behlulwa ngamagoli amabili kwelilodwa bedlala ne-Supersport United ngoLwesibili ebusuku ngemuva kokulimala isikhathi eside. Umdlalo na-Matsatsantsa asePitori bekungowokuqala kaZuma selokhu kwaqokwa umqeqeshi uGavin Hunt.
“Ngizizwa ngikahle futhi ngiyathemba ukuthi ukulimala kwami ​​kwedlule,” kusho uZuma.
I-Kaizer Chiefs yehlule i-Bloemfontein Celtic ngamagoli amahlanu kwamathathu emdlalweni womzuliswano wokuqala noSamir Nurkovic eshaya i-hatrick ngesizini edlule enkundleni yezemidlalo i-Moses Mabhida.
“Ngicabanga ukuthi lo mdlalo uzoba nzima ngoba i-Celtic yenza kahle ngemuva kokufinyelela kowamanqamu we-Nedbank Cup nowamanqamu we-MTN8. Ngesizini edlule baphinde basinikeza isikhathi esinzima emidlalweni emibili,” kusho uZuma.
Uthe ukuqala kwabo kabi isizini kungenxa yokuthi bebesathola ukuthi umqeqeshi wabo omusha, uGavin Hunt ufunani kubona.
“Ngokubona kwami ​​sidlale kahle emidlalweni emibili edlule,” uyasho.
UGavin Hunt ubuyisa abadlali abamqoka ekulimaleni. Egumbini lokwelashwa kukhona umdlali wasesiswini uKearan Baccus nomdlali wasemuva uReeve Frosler abasahlengwa ukulimala.
UHunt ukuqinisekisile ngesonto eledlule ukuthi uSamir Kurkovic ukulungele ukudlala, njengoba kuxazululwe izizathu zokudilizwa kwakhe okungezona ezempilo. Angase abuye ne-Celtic ngoMgqibelo ebusuku.
Amakhosi azovala unyaka ngomdlalo we-CAF Champions League edlala ne-CD Primeiro De Agosto yase-Angola ngoLwesithathu enkindleni yazemidlalo i-FNB, umdlalo uzoqala ngo-18h30.